na ku saabsan - Dextube
Ahama tubbada Toosan aan xuduud lahayn
BA ahama tuubooyinka aan xuduud lahayn
Pneumatic dhululubada ah tubbada
Heat Iskubedelka Tubooyinka
Tubooyinka Cadaadis Sare
Ahama aan xuduud lahayn, namana daaliyaan tubbada
qaybo tubbada dhammeeyey
Dextube waa soo saaraha ah xirfadeed ee sax tayo sare leh ahama tuubooyinka aan xuduud lahayn in Shiinaha.
waxyaabaha ugu muhiimsan ay diiradda saaraan sax tube ahama aan xuduud lahayn, gaar ahaan dhuumaha BA, UHP Tubooyinka, tuubooyinka Haydarooliga, tuubooyinka Instrumentation, tuubooyinka beddelan, iyo sidoo kale tuubada, namana daaliyaan.
Waxaan ujeedadoodu tahay inay siiyaan macaamiisha our leh alaabta sare u-qalma oo kharash-ool ah si waafaqsan heerarka caalamiga ah ama shuruud kartoo. Iyada oo fikradda adeegga 'daacad, xirfad iyo hufnaan', waxaan ku siin oversea iyo macaamiisha gudaha adeega qiimo-daray kaamil ah.
Iyada oo la isku halayn karo ka dib markii adeeg iibka, waxyaabaha our ayaa la dhoofiyo Germany, France, Canada, USA, Brazil, Malaysia iyo Singapore iwm la network ballaaran ee macaamiisha. waxyaabaha Our ayaa ku caanbaxey sare ka mid ah macaamiisheena.
Dextube, Your Aamin Partner on Solution qiray ahama Steel aan xuduud lahayn Tubooyinka.
Cinwaankaaga: 16 / F, Taihushijia Building, No.1198, Defu Road, Shanghai, 201821, Shiinaha